सोमपाल पहिलो प्रयासमै च्याम्पियन, सन्दीप अझै उपाधिविहिन! | Hamro Khelkud
‘राजेन्द्रको पदक फिर्ता ल्याएँ, अब वैकुण्ठको कीर्तिमान तोड्छु’
गोपीलाई ५ हजार मिटर दौडमा स्वर्ण!
मण्डेकाजीलाई थ्री स्टार कोषाध्यक्ष श्रेष्ठको पुरस्कार
सागको छैटौं दिन १९ खेलमा प्रतिस्पर्धा
आर्सनलको अर्काे हार
सोमपाल पहिलो प्रयासमै च्याम्पियन, सन्दीप अझै उपाधिविहिन!
ग्लोबल टि२० क्यानडामा तीब्र गतिका बलर सोमपाल कामीले पहिलो प्रतियोगितामै विनिपेग हक्सबाट प्रतिनिधित्व गर्दै उपाधि जिते ।
आइतबार सम्पन्न फाइनलमा सुपर ओभरमा भान्कुभर नाइट्सलाई पराजित गर्दै हक्स च्याम्पियन बन्दा सोमपाल फ्रेन्चाईज लिग जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बने । सोमपाललाई हक्सले न्युनतम ३ हजार अमेरिकी डलर मुल्यमा अनुबन्ध गरेको थियो । सोमपालको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फे्रन्चाइज लिग समेत हो । तर लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले पछिल्लो १६ महिना यता लगातार फ्रेन्चाईज लिग खेल्दा टोलीलाई उपाधि दिलाउन सकेका छैनन् ।
सोमपाललाई एक खेलमात्रै मौका
हक्सले सोमपाललाई एडमन्टन रोयल्ससँग मैदान उतारेको थियो । तर सोमपालले आफ्नो डेब्यू खेलमै खराब प्रर्दशन गरेपछि पुन मौका दिएन । सोमपालले उक्त खेलमा २ ओभरमा ३३ रन खर्चिदा ५ बलमा १ रन बटुलेका थिए । डेब्यू प्रर्दशनको कारण टोलीको विश्वास जित्न नसक्दा सोमपालले एक खेल बाहेक अन्य सबैमा बेन्चमा बस्नु पर्यो । तर सोमपाल पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फेन्चाइज लिग जित्ने नेपाली खेलाडी भने बने ।
सन्दीपको निराशजनक प्रर्दशन
आईसीसी टि२० एसिया विश्वकप छनोटमा खराब प्रर्दशन गरेका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेबाट ग्लोबल टि२० क्यानडामा उत्कृष्ट प्रर्दशनको आशा गरिएको थियो । ठूलो आसाका साथ टोरन्टो नेशनलले पनि ड्राफ्टमा ६० हजार अमेरिकी डलर खर्चेको थियो । तर सन्दीपले आशा गरे अनुसार प्रर्दशन गर्न सकेनन् ।
सन्दीपले ४ खेलमा ५ विकेट लिए । सन्दीपले कुल १५ ओभर बलिङ गर्दा १ सय ३१ रन खर्चिए । सन्दीपले पहिलो खेलमै ब्राम्प्टन वल्भ्ससँग ४ ओभरमा ४४ रन खर्चिदा १ विकेट लिएका थिए । सन्दीपले न्युजिल्यान्डका ओपनर समेत रहेका वल्भ्सका कप्तान कोलीन मुनरोलाई आउट गरेका थिए । दोस्रो खेलमा मोन्टरेल टाइगर्ससँग सुधारिएको प्रर्दशन गर्दै ४ ओभरमा २८ रन खर्चेर १ विकेट लिए । सन्दीपले विकेटकीपर म्याथ्युज क्रोसलाई एलवी डब्लू आउट गरे ।
तेस्रो खेलमा पुन टाइगर्ससँग ३ ओभरमा २५ रन खर्चेर १ विकेट लिए । त्यस्तै एलिमिनेटर खेलमा हक्सविरुद्ध सन्दीपले ४ ओभरमा ३४ रन २ विकेट लिएपनि टोरन्टो नेशनल बाहिरिनु पर्यो । जसक्रममा सन्नी सोहेल र उमर अकमलको विकेट लिएका थिए । समग्र सन्दीपको प्रर्दशन हेर्दा आशा गरे भन्दा खराब रह्यो ।
सन्दीप अझै उपाधिविहिन
सन्दीपले गतवर्ष इन्डियन प्रिमियर लिगमा तत्कालिन दिल्ली डेयर डेभिल्स र हाल दिल्ली क्यापिटल्सबाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्यवसायिक फ्रेन्चाईज लिगमा पाईला टेकेका थिए । सन्दीप व्यवसायिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी हुन् । झन्डै १६ महिनाको अवधिमा सन्दीपले इंग्ल्यान्डको टि२० ब्लास्टबाहेक अन्य सबै नाम चलेका विश्वका चर्चित ब्यवसायिक प्रतियोगिता खेलेका छन् । तर उपाधि जिताउन भने सकेका छैनन् ।
सन्दीपले डेब्यू गरेको आईपीएलमा दिल्ली समुह चरणबाटै बाहिरियो । सन्दीपले आईपीएलपछि क्यानाडा ग्लोबल टि२०,पाकिस्तान सुपर लिग, बिग ब्यास, टि१० लिग, अफगानिस्तान प्रिमियर लिग, क्वारेवियन प्रिमियर लिग, बंगलादेश प्रिमियर लिग जस्ता प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइसकेका छन् । जसमध्य ठूलो सफलता बिग ब्यास रहेको छ ।
बिग ब्यासमा सन्दीप सम्मिलित मेलवर्न स्टार्स फाइनलमा पुगेको थियो । तर सन्दीपको सम्मिलित स्टार्स मेलवर्न रेनेगड्सबीरुद्ध फाइनलमा नाटकीय १३ रनको हार बेहोरेपछि उपाधि चुम्न चुकेको थियो । त्यस्तै गत वैशाखमा सम्पन्न आईपीएलमा दिल्ली क्वालिफायरमा पुगेपनि चेन्नई सुपरकिंग्ससँग ६ विकेटले पराजित हुँदै बाहिरिनु पर्यो ।
बिग ब्यासको फाइनल र आईपीएलको क्वालिफायरनै सन्दीपले टोलीलाई दिलाएका ठूला सफलता हुन् । सोमपालले पहिलो प्रतियोगितामै उपाधि जित्दा सन्दीपले भने त्यो सफलताको स्वाद अझै चुम्न पाएका छैनन् ।
नेपालको जितमा बनेका ४ कीर्तिमान